Aljabri-gii ka Tirsanaa Sirdoonka Sacuudiga Oo Kashifay Siro ku saabsan Bin Salman. – Heemaal News Network
Sarkaal horey uga tirsanaa sirdoonka Sacuudiga ayaa sheegay in dhaxal-sugaha dalkaas Mohamed Bin Salman uu isagoo dibad-joog ku ah Canada u soo diray koox calooshood u shaqeystayaal ah si ay u dilaan.
Saad Aljabri oo horey u ahaa isku xiraha sirdoonka boqortooyada iyo dowladaha reer galbeedka ayaa ku sheegay Wareysi uu siiyey barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee Mareykanka in la beegsaday kadib markii uu dalka kasoo cararay 2017, markii uu xukunka maroorsaday Bin Salman.
Waxaa uu sheegay in sarkaal ay saaxiibo yihiin oo ka tirsan sirdoonka dal ka mid ah Bariga Dhexe uu uga digay inuu wajihi doono xaalad la mid ah tii Jamal Khashoqji oo dambi-baarayaasha ay tuhunsan yihiin inay 2018-kii qunsiliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku dileen koox ay soo dirtay Riyadh.
Aljabri ayaa sheegay in koox lagu magacaabo Cutubka Shabeelka oo Mohammed Bin Salman uu u aas-aasay inay fuliyaan dilalka ka baxsan sharciga, kufsiga iyo jirdilka.
“Digniinta aan helay waxay aheyd, ha u dhowaan howlgalka Sacuudiga ee Canada, ha aadin qunsuliyadaha, ha qaadin safaaradda, waxaad meel sare kaga jirtaa liiska,” ayuu Aljabri u sheegay barnaamijka 60 Minutes.
Ma jirto cid xaqiijin karta sheegashooyinka Aljabri. hase ahaatee saraakiisha Canada ayaa sheegay inay ka war hayaan dhacdooyin ay wakiilo shisheeye isku dayeen inay ku halis geliyaan dad ku nool Canada,” iyaga oo ku qeexay hanjaabadda mid aan gebi-ahaanba la aqbali karin.
Puntland Oo Beenisay Inay Taageerto Ahlusunna Oo Lagu Eedeyay.
Raysal Wasaarihihii Lubnaan Oo Maanta Is-casilay.
Amisom Oo Go’aan Ka Qaadatay Xasuuqii Kenya Ka Gaysatay Gobolka Gado
Dagaalyahanada Daacishta Somaliya Oo Dhoolatus Milatari soo Bandhigay.(Sawiro)
Heemaall November 16, 2021